Blog Suuqgeynta ugu Fiican
Blog Suuqgeynta Ugu Fiican Abid!
Sunday, May 9, 2010 Sunday, May 9, 2010 Douglas Karr
Waxaa jira boggag internet ah oo suuqgeyn wax ku ool ah ka jira, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan rumeysto in waxa aan isku soo duubnay ay yihiin qodobbada ugu wanaagsan waligood mowduuc kasta. Ma waxaan nahay kuwa ugu fiican? Suura gal maaha in la beeniyo, saw maaha? Hubi - waxaan u adeegsan karnaa tirada macaamiisha, kuwa raacsan, taageerayaasha iyo kuwa jecel inay isku dayaan inay go'aansadaan… laakiin taasi maahan tilmaame ugu fiican, taasi waa tilmaame jecel or ugu caansan.
Sheegista in shirkaddaada, sheygaaga ama adeeggaagu yahay kan ugu fiican laga yaabo inuu noqdo mid ka mid ah taatikada ugu weyn ee kor u qaadista weligeed sababo dhawr ah awgood:
Dadku way rumaysan yihiin. Dadku waxay ku siin doonaan faa iidada shakiga iyo doonista doonayaa inaad rumaysato waxaad sheegayso waa run. Siyaasiyiinta ayaa tan bartay waqti fog kahor… sheeg waxa codbixiyayaashu rabaan inay maqlaan, ka dibna samee wax alla wixii aad rabto markaad xafiiska timaado.
Waa is-sheegid is-dhammaystiran. Ku dhaha adigu waxaad tahay kan ugu fiican waxay run noqon doontaa markaad aaminto. Waxaad bilaabeysaa inaad naftaada ku hanto heer sare oo aad marwalba hubiso inaad ka dhex muuqato tartamayaasha.
Waxay ku dhejineysaa tartanka difaaca. In kasta oo aad sii wadid uruurinta faa'iidooyinka noqoshada kan ugu fiican, tartankaaga ayaa hadhay isagoo isku dayaya inuu caddeeyo inaysan dhab ahaantii ku jirin kaalinta labaad.
Waxaa la i weydiiyay toddobaadkan in tani ay tahay xeelad khiyaano iyo in kale. Uma doodayo khiyaano waxaanan u quudhsadaa siyaasada sidii caadiga ahayd. Taa baddalkeeda, waxaan ku dhiirrigelinayaa dadka iyo shirkadaha inay naftooda u suuq geystaan ​​sida ugu fiican - oo ay u gaarsiiyaan rajadaas.
Tusaalaha ugu weyn ee tan ayaa ah Samee Lacag Online ah koox ka ganacsata internetka. Kaliya maahan inay kor u qaadaan boggooda iyo ilaha sida ugu wanaagsan, waxay sidoo kale maalgashi xoog leh ku abuuraan shakhsiyadda ay iyagu yihiin dadka ugu guuleysta khadka tooska ah. (Shaqsi ahaan, waxaan u maleynayaa in suuq geyntoodu ka wanaagsan tahay natiijooyinka maalgashiga adeegyadooda… laakiin taasi waa fekerkeyga oo keliya.)
Maxaa kuu diidaya inaad adeegsato xeeladdan? Qeex waxa aad ku fiicantahay oo bilow inaad maanta kor u qaaddo.
Halkaan waxaa ku cusub Hal-abuurnimo Silicon Prairie
Waxaan ku faraxsanahay inaan qayb ka ahay Suuqgaynta Tiknoolajiyadda ugu Fiican Blog!